स्पिरो: एआई प्रयोग गरेर सक्रिय बिक्री सगाई Martech Zone
स्पिरो कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग गर्दछ तपाईंको बिक्री नेताहरूलाई कार्यशील अंतर्दृष्टि र तपाईंको बिक्री प्रतिनिधिहरूको लागि सक्रिय सिफारिशहरूको लागि अर्को उत्तम चरणहरू गुमाएका अवसरहरू रोक्न मद्दत गर्न र बिक्री उत्पादकता वृद्धि.
स्पिरो ग्राहकहरु केहि अद्भुत परिणामहरु रिपोर्ट, सहित:
संकलन गर्ने क्षमता १ times गुणा बढी डाटा
तपाइँ वा तपाइँको बिक्री टीम को लागी क्षमता %०% बढी सम्भावनाहरुमा पुग्नुहोस् उही समयसीमामा।
क्षमता २०% बढी बिक्री बन्द गर्नुहोस् सम्झौता
Spiro समावेश को लाभ
स्पिरोले बिक्री स्वचालनमा नयाँ दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दैछ: सक्रिय सम्बन्ध व्यवस्थापन.
फोकस टीम गतिविधिहरु - स्पिरो सहायकले प्रयोगकर्तालाई एआई र प्रयोगकर्ता-उत्पादित कार्यहरूको प्राथमिकता दिनहुँ सूची प्रदान गर्दछ जसले आउटपुट अधिकतम गर्दछ।
टीम उत्पादकता बढाउनुहोस् - निर्मित VoIP कलिंग र एआई-जनरेट गरिएको कल सूचीले टोलीहरूलाई अधिक सम्भावनाहरू सम्म पुग्न अनुमति दिन्छ, र स्वचालित कल लगिgingले टीम दक्षता बढाउँछ।
सक्रिय संलग्नता सुनिश्चित गर्नुहोस् - स्पिरो कुराकानीमा आधारित सक्रिय अनुवर्ती अनुस्मारक प्रदान को लागी कुनै दरार को माध्यम बाट पर्ची छैन भनेर।
सम्झौता प्रगतिमा तेजी ल्याउनुहोस् - स्पिरोले सment्लग्नता स्कोरहरूको विश्लेषण गर्दछ र सम्भावनाहरू बन्द हुने सम्भावनाहरूमा रिपहरू केन्द्रित गर्दछ।
जीत दरहरू अधिकतम गर्नुहोस् - स्पिरोले हराएको सम्झौता रोक्न मद्दतको लागि पूर्ण पाइपलाइन दृश्यता र कार्यवाही अंतर्दृष्टि प्रदान गर्दछ।
बिक्री पूर्वानुमान - स्पिरोले तपाईंको पाइपलाइनमा पूर्ण दृश्यता प्रदान गर्दछ र सटीकतामा सुधारको लागि सौदा संलग्नता स्कोरहरू निर्दिष्ट गर्दछ।
स्पिरोले एक मार्केटिंग अटोमेसन उपकरण प्रतिस्थापन गर्दैन (यसको सट्टा, ती उपकरणहरूसँग एकीकृत हुन्छ), तर तपाईं ored०० सम्पर्कहरूको लक्षित सूचिको लागि भविष्यको समय र मितिको लागि तालिका बनाउने योग्यता ईमेलहरू पठाउन सक्नुहुनेछ।
एक Spiro प्रदर्शन प्रदर्शन गर्नुहोस्
मा शेरिललाई विशेष धन्यवाद मंत्रिमंडल फेला पार्न को लागी!
टैग: aiकॅबिनेटमसौदा बढाउनुहोस्बिक्री बढ्छ बन्दआउटबाउन्ड बिक्रीभविष्यवाणी बिक्री संलग्नताबिक्री सक्षमताबिक्री संलग्नताबिक्री टोली गतिविधिबिक्री टीम उत्पादकतास्पिरोभ्वाइस